Nezvedu - Dongguan Guta Baby Furniture Co., Ltd.
Dongguan Guta Mucheche Furniture Co, Ltd. yakavambwa muDongguan muna 2007, iine Dongguan Guta BaoFa Furniture Co, Ltd. uye Dongguan Pinweitongju Furniture Co, Ltd.makambani anoenderana ari pasi peyechete manejimendi. Makambani edu eboka anoshanda mukugadzira nekugadzira upholstered Vana fenicha uye Pet fanicha, senge Vana Masofa, Vana Zvigaro, Vana Mibhedha, maOttoman, Preschool Sectional Sofa Sets, Baby Cot uye Pet Sofa Mabhedha, Iron Pet Mabhedha ... ect.
Takavaka zvivakwa zvemazuva ano zviviri zvekugadzira ne20000 sqm, pamwe chete neakanakisa timu yeR & D uye vanopfuura hunyanzvi vashandi mazana matatu muDongguan, China.
Isu tinoseta iro dhipatimendi remhando yepamusoro se ISO9001: 2015, inosanganisira yehutano vimbiso, odhita yepamusoro, QE, IQC, IPQC, FQC uye OQC. Chitupa chekuongorora cheFekitori chiripo che: SMETA, ICTI, WCA, GSV, SQP… nezvimwe. Kunyanya, isu tiri fekitori yekutanga iyo yakapa iyo Disney kugadzira rezinesi revana rakasimudzwa fenicha uye OEM yeiyi hombe brand kupfuura makore mapfumbamwe kusvika zvino. isuwo tinodada kuve mutengesi wemakambani eTJX, Melissa & Doug, Aldi, Dunelm, Jollyroom ... ect. Zvichakadaro kambani yedu yakapasa iyo Walmart Audit uye yakapa Walmart mutengesi ID.
Isu tinopa OEM & ODM & Yakagadzirirwa sevhisi, yemahara neyedu mhando "KOOPO" "KOPOO MAMBO" "BABYLAND" yemusika wekunze nekunze. Mhando dzese dzinoenderana nezvitupa zveTSCA, EN71, ASTM, FSC, CPSIA ... ect.
Kambani yedu yakazvipira kuvandudza zvigadzirwa zvitsva neazvino dhizaini dhizaini uye hunyanzvi matekinoroji, shingairira kupa vanhu chigadzirwa chakanaka nemutengo unodhura, kuunza Vana nePet mararamiro ane hutano, uye anofara kumba kwako.
Kugamuchirwa kushanyira fekitori yedu kana kufona isu chero nguva!